Olana Corona: Mety haharitra hatramin'ny 2 ka hatramin'ny 3 taona izany alohan'ny hivoahanao hidin'ny hidy indray, raha tsy hoe fanaraha-maso sy fampiharana voalohany: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 7 Aprily 2020	• 18 Comments
Satria haingana ny haingam-pandrosoana an'ny cririsavirus criris dia saika tsy ho tohizana intsony. Na eo aza izany dia te hanome fanazavana momba ny ady aho. Ity dia manomboka amin'ny famintinana ireo fisehoan-javatra sasany. Na dia mety ho sarotra aza ny mijanona ho tsara sy mahita fanantenana amin'izao vanimpotoana lehibe izao, tiako ny milaza aminao fa tena marina izany. Mahery ianao; tena mafonja!
Manomboka somary mangatsiaka ny famakafakana, satria mila milaza aho fa efa akaiky ny varotra voafehy eo amin'ny marika eo ankavanana, efa voalazan'ny bokiko. Tamin'ny vanim-potoan'i Trump, io marika io dia nampifamatotra tamin'ny 'fisainana mitsikera' amin'ny alàlan'ny olona toa an'i Alex Jones (infowars.com) ary Robert Jensen (jensen.nl) amin'ny alalàn'ny Trump mitovy, Boris Johnson, Jair Bolsonaro (Brezila) ary ny olona toa an'i Thierry Baudet ary izay efa niniana natao ho 'fisainana tsikombakomba'.
Io marika ‘havanana’ io dia tsy maintsy voapoizina mba ahafahany miasa mankany amin'ny fahefana ambony ankavia, ny fampidirana ny Green New Deal ary ny toeran'ny famonjena kaominista. Raha ny fahitana azy, ity fanjakan'ny famonjena ity dia tsara ho an'ny tontolo iainana, manome vola fototra sy famerenana indray ny harena, fa hipetraka ao anaty teknolojia 'fivelomana' miaina 'ara-teknolojia tanteraka.
Topazo maso ny fizotry ny hetsika ary fantaro ny kofehy iraisana. Azafady tsindrio ny rohy manga raha te hijery ny fanamafisana:
Johnson & Johnson Sampana Holandey Nilaza i Janssen fa saika hanao vaksiny izy, saingy "ho azo" amin'ny lohataonan'ny taona 2021 (ka raha te-hivoaka ny hidin-trano aloha ianao dia tsy maintsy miditra amin'ny fomba sinoa, jereo ny teboka 11).
Bill Gates: manorina Ozinina vaksiny 7 ho an'ny famokarana
Bill Gates: Tsy misy mahazo mandeha manao dia intsony tsy misy fanamarinana voan'ny vaksiny sy / na nanangana tsimatimanota
Boris Johnson tao amin'ny hopitaly ICU (hafatra: fanamaivanana ny coronavirus nataon'ny marika eo ankavanana)
I Trump dia ho omena tsiny noho ny fanamaivan-tena tsy mampahafantatra / tsy mampianatra avy amin'ny governemantan'i Georgia
Ny marika eo amin'ny ankavanana dia hiampanga amin'ny fanamaivanana ny loza hivoahana
Nanohana an'i Trump i Jensen ary nanintona ireo mpanaraka ny fandrika (saingy tsy miresaka an'i Trump ny fandefasana farany azy, satria fantany fa i Martin Vrijland dia manala azy ao amin'ity)
Jensen dia mampiseho fandrahonana fanakatonana mandritra ny 3 taonanandefa omaly) ary noho izany dia mikendry mangingina ny famonjena tadiaviny: mivoha malefaka (amin'ny fampiharana sy teknolojia) fa tsy manizingizina ny fanoherana
Jensen: Manery i Thierry Baudet mieritrereta hatramin'ny farany (ilay marika eo amin'ny ankavanana manambana amin'i Trump indray)
Jensen dia tsy manontany ny momba ilay viriosy sy / na ny tantara loto marinafa mifantoka fotsiny amin'ny mpihaino amin'ny isa (ampahany amin'ny paikady havanana manerantany).
Ny firaketana horonantsary avy any Shina dia mampiseho ny manantena hoavy ary mitondra azy io ho vahaolana mahomby (jereo teboka 8), jereo koa ity lahatsoratra Trouw ity.
De Green New Deal utopia ny fizarana harena - miampy fidiram-bola fototra - mihazona ny maha-olombelona (ankehitriny mihidy) ny vava manondraka ny saosin'ny fanjakana kômonista
ny fanoherana fifehezana (sandrin'ny fanjakana) dia nanomboka ny saron-tady antena handoro afo hahafahana mampifandray ny fanoherana ny 5G amin'ny lainga diso fa ny 5G dia mahatsapa ny vokarin'ny otrik'aretina, ka io no tena loza ateraky 5G sy ny Internet amin'ny (miaina) zavatra mitondra ho ratsy laza.
Ny alimanaka Luciferian dia aseho amin'ny toerana rehetra amin'ny alàlan'ny tandindona avana (jereo ny boky); ihany koa mandritra ny kabary nataon'i coronagin anglisy anglisy.
Tokony hanomboka mino ny herintsika manokana isika fa tsy manantena azy avy any ambony. Tena zava-dehibe ny ilazanao hoe 'Tsia' ary fantaro fa miaraka amin'ny sehatra lehibe ianao. Fotoana tokony hitenenanao hoe "eny" amin'ny herinao manokana sy ny fahefam-pahefanao.
Mba hilalao amin'ny marobe rohy en marina lalao mifampitady sy voalamina tsara: 'matchmaking'. Ny script ho an'io hetsika iray manontolo io dia efa teo amin'ny talantalana. Mamaritra izany aho ao amin'ny boky. Izy io dia soratra iray ahafahan'ny marika eo amin'ny ankavanana hitombo voalohany ho fanohanana ary avy eo dia hilentika ny mpandinika feno tsikera.
Ity dia manome lalana ho an'ny toby fanabeazana indray ('fitandremana ara-pahasalamana ara-tsaina'), fiaraha-mientana ara-teknolojia miaraka amina rafitra mifototra amin'ny fitondran-tena sy fanilihana ara-tsosialy (manomboka amin'ny fifangaroana ara-tsosialy), miaraka amina vola vaovao mifototra amin'ny vola crypto-currency (traceable). Ho fanampin'izany, ny zavatra rehetra vidianao na amidinao dia hanantona ny 'Internet amin'ny zavatra' ary ho azonao izany ny marika dia tsy maintsy efa nahazo ny kaomina nomerika anao, ao anatin'izany ny taham-pandrindranao, ary eo koa ny ifandraisan'ny trosa sosialy sy ny fifandanjan'ny bankinao.
Ity krizy ity dia mitovy tanteraka amin'ny voalazako tao amin'ny bokiko. Ilaina araka izany ny hananana izany fahalalana fototra (anisan'izany ny momba izany Teknika NLP sy hypnotic) ary mizara. Satria, rehefa mandeha any amin'ny hopitaly ianao mba hanao sarintany ny dokotera alohan'ny hahatongavany vahaolana, dia mitovy amin'ny rafitra virus Viriferian izay ahitantsika ny tena endriny. Izaho sy ianao dia manana ny vahaolana fa tsy maintsy fantarintsika aloha ilay olana. Noho izany, atombohy mamaky ary aparitaka ny hafatra.
eto vakio ilay tatitra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety anio.
Lisitry ny rohy loharano: telegraaf.nl, time.com, facebook.com, politico.com, trouw.nl, geenstijl.nl
Ho taona miroborobo ve ny taona 2020? Ny faniriana tsara indrindra avy amin'i Martin Vrijland
Tags: 3, App, Baudet, Bolsonaro, Sinoa, Sinoa, krizy corona, Coronavirus, telo, Featured, IC, taona, Jensen, Johnson, lockdown, Marka, puntensysteem, marina, Trump, vaksiny
Domi nanoratra hoe:
7 Aprily 2020 ao amin'ny 10: 44
Salama Martin, hanam-potoana hamakiana ny bokinao aho! Ny zavatra mahaliana ahy: manana hevitra momba an'i David Icke ve ianao?
7 Aprily 2020 ao amin'ny 13: 57
Vakio indray ity fihetsiketsena ity:
7 Aprily 2020 ao amin'ny 20: 28
Ny tafatafa farany natao tamin'i David Icke tao Londonreal dia mahery tokoa. Tsy misy na inona na inona fa ny lahatsary avy amin'ny YouTube dia natsipy fa gaga i Brian Rose ary maro ny zavatra hafa.
Amin'ny farany, Icke dia nilaza fa tsy mihaino ary ity farany fotoana farany ity dia ny fitazonana ny fahalalahana.
Ny mijanona sy manaiky hatrany dia ny mitazona ny tenanao ao anaty boaty / amponga. Avy eo dia miverina ao anaty boaty ny mpanararaotra / andriamanitry ny hery.
Ny safidy dia antsika.
Fantatro ny tianao holazaina amin'ny alàlan'ny fijerena akaiky azy ireo na te-hisintona anay hiditra amin'ny simulation izy ireo na tsia. Manangona avy amin'ny tafa sy dinika farany fa i David Icke dia toa antsika ihany.
7 Aprily 2020 ao amin'ny 20: 39
Indrisy, David Icke koa dia niditra tamin'ny marika eo amin'ny ankavanana (amin'ny alàlan'i Boris Johnson). Ka raha maneho ny marina ianao ary mandritra izany fotoana izany dia nampifandray ny tenanao amin'ilay marika elatra havanana haingam-pandeha ianao, dia ho trandraka amin'izany ny mpanara-dia anao.
Mampalahelo fa io no paikady.
7 Aprily 2020 ao amin'ny 21: 05
Raha mijoro izany dia tsy maninona na mitsy na havanana ianao, jiosy, silamo na inona na inona. Isaky ny voasambotra an-trano isika rehetra ary voatery noroahina handray anjara amin'ity ambaratonga ity.
Fa araky ny voalazanao dia fanampiana ny fanampiana.
Toy ny zanaka adala izay nanimba ny vola (angovo) eto ambonintsika isika. Na izany na nanao ankavia na havanana isika. Fa sahy miverina ve isika?
Aleo ny miverina toy ny andevo noho ny mpanapaka sy mpampahory. Ny olona / sampandraharaha very loatra (iraika ambin'ny folo / ambany fatra matetika) dia manana olana lehibe.
Lalana kely ny lalana miverina, mazàna ianao irery no voageja
7 Aprily 2020 ao amin'ny 22: 08
Matahotra aho fa namahana an'io fampahalalana io i Icke, izany hoe ny 5G dia manohitra ny fitomboan'ny oxygen amin'ny havokavoka. Manana ahiahy volontany maizina aho fa tohatra miorina ao amin'ny haino aman-jery hafa izany…
Mazava ho azy fa manantena aho fa diso tanteraka an'i David Icke, satria maro ny zavatra tsara izay ekeko tanteraka! (ary izany indrindra no tanjon'ny harato fiarovana)
7 Aprily 2020 ao amin'ny 23: 35
David Icke dia fehezin'ny mpanohitra, misy ny tandindona izay ampiasainy. Zahao ny video eto ambany
"Ny famantarana sy ny famantarana no manjaka an'izao tontolo izao, fa tsy ny teny na ny lalàna."
7 Aprily 2020 ao amin'ny 23: 47
Hevitra tsara, izany no antony hitsidihanay ny tranokalanao hampiditra azy io amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Natahotra aho fa hanapoaka zavatra izy amin'ny fampifangaroana tantara vahiny.
Ny hitantsika izao dia ireo mirehitra 5g antsoina hoe maser no nodorana nanerana izao tontolo izao. Moa ve izany amin'ny molara mpiray tsikombakomba amin'ny zoro? Napetraka ve ity raha hieritreritra ny rehetra fa efa vita, tsy mila manao na inona na inona isika. Hay ve ireo rafitra taloha izay nosoloina amin'ny vola fiantohana ankehitriny?
Ny zava-misy dia mijanona ho tandindomin-doza izy ireo ny milaza fahamarinana izay manetsika ny fahatsiarovan-tena. Mahatonga ny fahatongavan-tsainao ho mafy orina izany hahafahanao manivana bebe kokoa.
Mitranga izany amin'ny alalàn'ny fanadihadianao koa, mijery lavitra lavitra noho ny eritreretinao tamin'ny voalohany.
Tsy ho tsara raha tonga dia haingana ny vahaolana. (Teny mahafinaritra hoe 'vahaolana' 😉).
7 Aprily 2020 ao amin'ny 11: 40
Iza no nanontany zavatra be taona? Iza no nanapa-kevitra ho an'ny be antitra hametraka tsy ara-dalàna, raha tsy mazava, fisamborana trano? Nisy nanontany ve ny loza mety haterin'izy ireo? Iza no nanontany azy ireo raha vonona hamoy ny vola fisotroan-dronono ao amin'ny toe-karena rava izy ireo? Iza no nanontany azy ireo raha, mba hanavotana ny fahasalamany, nahatsapa izy ireo fa ilaina ny manidy an'izao tontolo izao ary hanakatona ny toekaren'izao tontolo izao? Tena ratsy tokoa ve ny "loza ateraky ny Covid-19" amin'ny faran'ny ain'izy ireo ka mahatonga azy ireo hamoy an'ireny volana sarobidy lasa iny, anisan'izany ny volany farany any amin'ny fahababoana? Ary inona ny fahafatesana am-boalohany mety hitranga amin'ny tranga maro? Sa azo jerena ihany koa fa ny valan'ny pension an'ny holandey 1500 miliara dia afaka nangalatra vetivety teo ambanin'ny fe-potoana fizarana mitovy amin'ny famonjena ny kômonista sy ny Fifandraisana Vaovao Maitso? Ah, raha ny marina, izy ireo dia taranaky ny mpandoto tena lehibe, ka azonao atao ny manolotra izany ao!
7 Aprily 2020 ao amin'ny 13: 53
Ary tsy maintsy hanafoanana an'io vola io isika, hany ka baomba! Raha ny coronaviurs dia mbola tsy ampy handresena lahatra olona, ​​dia vitsy ihany ny korontana. Olana, fanehoan-kevitra, vahaolana amin'ny olona rehetra?
7 Aprily 2020 ao amin'ny 15: 01
Ha ha, eny, inona ny vola holazainao raha toa ka tsy afaka handanianao akory ianao. Nametraka izy ireo
mazava ho azy, miaraka amin'ny vaovao sandoka izany.
Raha mba niteny fotsiny izany dia niteniteny tamina fivarotam-panafody manodidina ny fehin-kibo 225, eny, nahatonga azy ho azo itokisana kokoa ;-), zavatra !!! mampihomehy kokoa mazava ho azy, mihomehy !! Vazivazy Corona, ha ha (tsy mahafinaritra)
Satria ny mpanao heloka bevava miovaova be dia be mahalala fa ny saron-tava dia miaro ny fomba maty (toy ny viriosy tsy hita maso) amin'ny fotoana rehetra. Ka tsy misy dikany izany ramshackle izany.
Ny sivana avy amin'ny sigara sivana iray dia afaka nanakana azy io nandritra ny fotoana kelikely.
Ny setroka avy amin'ny sigara dia mandalo ny saron-tava ihany koa.
Ny antitra dia mahantra, mipetraka eo izy ireo toy ny ondry volon'ondry, tena mahatsikaiky.
Manao zavatra ny amin'izany ny ankizy. Ahoana no itiavanao azy?
8 Aprily 2020 ao amin'ny 14: 16
ha ha, mandiniha tena, vakio ireo na zavatra hafa, ho fitaomam-panahy amin'ny vaovao sandoka misy menaka
7 Aprily 2020 ao amin'ny 13: 58
Angano ny tantaram-piainana..Paper Bitte!
Mamerina ny tantara ny tantara, saingy amin'ny fieritreretana feno hafetsena toy izany ka tsy ahitantsika ny endriny raha tsy efa vita ny fahasimbana.
Lydia Roosje nanoratra hoe:
7 Aprily 2020 ao amin'ny 14: 03
Vao avy nahazo antso avy amin'ny zanaky ny ekipan'ny baolina kambana / reny:
Avy amin'ny hopitaly University
Ny fangatahana dia ny maka-misintona ny fampiharana ary mamita azy isan'andro (na dia tsy manana fitarainana aza ianao).
Ny tanjona dia ny hahazo fahatsiarovan-tena bebe kokoa amin'ny fizarana corona amin'ny NL.
Azafady alefaso amin'ny tamba-jotra fanampiny anao
Oay, voasakan'ny ondrilahy aho. Ny AH dia toa ny maze miaraka amina fatrany rehetra ary ny olona mitsambikina amin'ny fampihorohoroana.
Raha te hitrandraka lalina kokoa ny zava-mitranga ianao, ity horonantsary eo amin'i Lauda Leon sy i Shane Bales (aka ilay Ruiner) ity dia natoro. Samy avy amin'ireo tetikasa ireo izy ireo. Inona no mendrika ...
7 Aprily 2020 ao amin'ny 19: 26
7 Aprily 2020 ao amin'ny 21: 12
Joris Michels nanoratra hoe:
8 Aprily 2020 ao amin'ny 09: 02
Ny hevitrao aho androany https://www.dotcomnieuws.com/alternatieve-media/david-icke-london-real-6th-april-2020-full/ jereo io, fa vakio aloha ny boky iray misy kafe ao amin'ny masoandro!
8 Aprily 2020 ao amin'ny 13: 22
Izay miandry ny Holandy koa (araka ny efa nambarako hatramin'ny taona 2013):
« Ny eritreritra lehibe: izao tontolo izao no hamboarintsika aorian'ny krizy corona?
Kaonferansa ho an'ny mpanao gazety Mark Rutte sy Hugo de Jonge: ilay fiarahamonina iray sy sasany metatra sy ny fampidirana ireo fampiharana »
Total fitsidihana: 2.598.000
Femke Halsema dia manao fihetsiketsehana raha tsy misy fahazoan-dàlana ara-dalàna sy vondrona ary ny elanelan'ny fiaraha-monina 1,5 m tsy azo ovana
Olona an'arivony tao amin'ny kianja Dam Square no nandoa fihetsiketsehana na natokana ho an'i George Floyd izay tsy misy mahafantatra?
Fomba famonoana ataon'ny polisy Minneapolis George Floyd hamahana ny ady an-trano?
Harry mampahafaty op Femke Halsema dia manao fihetsiketsehana raha tsy misy fahazoan-dàlana ara-dalàna sy vondrona ary ny elanelan'ny fiaraha-monina 1,5 m tsy azo ovana
clairvoyance op Femke Halsema dia manao fihetsiketsehana raha tsy misy fahazoan-dàlana ara-dalàna sy vondrona ary ny elanelan'ny fiaraha-monina 1,5 m tsy azo ovana
Zandi Eyes op Femke Halsema dia manao fihetsiketsehana raha tsy misy fahazoan-dàlana ara-dalàna sy vondrona ary ny elanelan'ny fiaraha-monina 1,5 m tsy azo ovana
fabricator op Fomba famonoana ataon'ny polisy Minneapolis George Floyd hamahana ny ady an-trano?
Fakafakao op Femke Halsema dia manao fihetsiketsehana raha tsy misy fahazoan-dàlana ara-dalàna sy vondrona ary ny elanelan'ny fiaraha-monina 1,5 m tsy azo ovana